Ụlọ Nche | Ọgọst 2011
GỤỌ NKE Albanian Amharic Arabic Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kirundi Korean Lithuanian Macedonian Malagasy Myanmar Norwegian Ossetian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sepedi Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese
Gịnị ka Jizọs bu n’obi mgbe ọ sịrị Sọl: “Ịnọgide na-agba ndụdụ e ji achị anụ ụkwụ na-eme ka ihe siere gị ike”?—Ọrụ 26:14.
▪ N’oge Baịbụl, ndị ọrụ ugbo na-eji ndụdụ e ji achị anụ eduzi ụmụ anụmanụ ha ji akọ ugbo. Ndụdụ ahụ bụ osisi pịrị ọnụ nke nwere ike iru mita abụọ na ọkara n’ogologo. Otu isi ndụdụ ahụ na-enwe ígwè dị nkọ n’ọnụ ọnụ ya. Ọ bụrụ na anụmanụ alaa azụ, ndụdụ ahụ na-adụ ya, merụọ ya ahụ́. Isi ya nke ọzọ na-enwe obere mmà e nwere ike iji wepụ ájá, ahịhịa ma ọ bụ ihe ndị ọzọ nyapagidere n’ọ́gụ̀ e ji na-akọ ala.
Mgbe ụfọdụ, a na-eji ndụdụ a e ji achị anụ emere ngwá ọgụ. Otu ọchịagha na onyeikpe e nwere n’Izrel, nke aha ya bụ Shamga, ji “ndụdụ e ji achị ehi” gbuo narị ndị Filistia isii.—Ndị Ikpe 3:31.
E jikwa ndụdụ a e ji achị ehi mee ihe atụ n’Akwụkwọ Nsọ. Dị ka ihe atụ, Eze Sọlọmọn dere na okwu onye maara ihe “dị ka ndụdụ e ji achị ehi,” nke mmadụ ji adụtụ enyi ya ka enyi ya nwee ike ime mkpebi dị mma.—Ekliziastis 12:11.
Mgbe Jizọs laghachiri n’eluigwe, o jikwa ndụdụ e ji achị anụ mee ihe atụ. Ọ gwara Sọl, bụ́ onye nọ na-akpagbu Ndị Kraịst, ka ọ kwụsị ‘ịgba ndụdụ e ji achị anụ ụkwụ.’ Ihe ga-agbata onye nụrụ ihe a Jizọs kwuru n’obi bụ anụmanụ dị isi ike nke jụrụ ịga ebe onye nwe ya na-agwa ya ka ọ gaa. Ọ dị mma na Sọl nabatara ndụmọdụ ahụ Jizọs nyere ya ma gbanwee ndụ ya, ghọzie Pọl onyeozi.
Olee otú ndị Juu nke oge Jizọs si amata ihe na-akụ n’abalị?
▪ Ọ bụrụ na anwụ na-acha, ndị Juu nke oge Jizọs nwere ike iji onyinyo amata ihe na-akụ n’ehihie. Ma, ọ bụrụ n’abalị ma ọ bụ oge mmiri ruru, ihe ha na-eji amata ihe na-akụ bụ ihe a na-akpọ klọọkụ mmiri. E wezụga ndị Juu, ndị Ijipt oge ochie, ndị Peshia, ndị Gris, na ndị Rom jikwara klọọkụ mmiri mata oge.
Akwụkwọ bụ́ The Jewish Encyclopedia kwuru na akwụkwọ iwu ndị Juu a na-akpọ Mishnah na nke a na-akpọ Talmud kwuru banyere klọọkụ mmiri ahụ ma kpọọ ya “aha dị iche iche. O nwere ike ihe mere ha ji kpọọ ya aha dị iche iche bụ na klọọkụ a dị n’ụdị n’ụdị. Ma aha niile ahụ pụtara otu ihe, ya bụ, mmiri ji nwayọọ na-atapụ kpọm kpọm kpọm.”
Olee otú klọọkụ a si arụ ọrụ? A na-agbanye mmiri n’ime karama abụọ, kpọpuo ha abụọ obere ka mmiri nwee ike isi na nke dị n’elu na-abanye na nke dị n’ala. A na-akanyekwa ihe n’ahụ́ karama ndị ahụ ka e nwee ike ịma ebe mmiri dị na ha ruru. Mmadụ nwere ike ịma ihe na-akụ ma o lee ebe mmiri dị na karama nke dị n’elu ma ọ bụ nke dị n’ala ruru.
Ndị agha ndị Rom na-eji ụdị klọọkụ a ama oge nche dị iche iche a na-enwe n’abalị. Mgbe ọ bụla oge nche nke ọ bụla ruru, ha afụọ opì. Onye ọ bụla nụrụ opì ahụ ga-eji ya mara mgbe nke ọ bụla n’ime oge nche anọ a na-enwe n’abalị bidoro na mgbe ọ gwụrụ.​—Mak 13:35.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ị̀ Maara?
È Kwesịrị Ịkụziri Ụmụaka Banyere Chineke?
Gịnị Ka E Kwesịrị Ịkụziri Ụmụaka?
Ònye Kwesịrị Ịkụziri Ụmụaka Banyere Chineke?
Olee Ụzọ Kacha Mma Isi Kụziere Ụmụaka Banyere Chineke?
IHE NDỊ NA-EME KA E NWEE OBI ỤTỌ N’EZINỤLỌ Na-akwanyere Di Gị Ma Ọ Bụ Nwunye Gị Ùgwù
“Ọ Na-echeta na Anyị Bụ Ájá”
KỤZIERE ỤMỤ GỊ IHE Ihe Mere Ndị Mmadụ Ji Hụ Dọkas n’Anya
Olee Otú Ị Ga-esi Amata Ndị Na-efe Chineke Otú Ọ Chọrọ?
Poopu Ọ̀ “Nọchiri Anya Pita Dị Asọ”?
NDỊ NA-AGỤ AKWỤKWỌ ANYỊ NA-AJỤ, SỊ Chineke ò bi ebe Niile?
Ụbọchị Obi Ụtọ na nke Ịtụ Anya Ihe Ọma
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere ỤLỌ NCHE Ọgọst 2011
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ ỤLỌ NCHE Ọgọst 2011
ỤLỌ NCHE Ọgọst 2011